‘भ्रष्ट’ मन्त्री हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डकी बुहारी बिनाको के हुन्छ? « Deshko News
‘भ्रष्ट’ मन्त्री हटाउँदै प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डकी बुहारी बिनाको के हुन्छ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनकाे अन्तिम तयारी गरेका छन् । ओलीले आज केही मन्त्री हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने तथा मन्त्रालय हेरफेर समेत गर्दैछन् ।
ओली सरकारमा सबैभन्दा विवादित र भ्रष्टाचार गरेको भनेर आलोचित रघुवीर महासेठ हट्ने सूचीमा एक नम्बरमा छन् । महासेठमाथि आफ्नी पत्नीमार्फत खुलेयाम सचिवसँग घुस माग्ने, ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गर्ने, सिण्डिकेट कायम राख्ने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गरेको आरोप छ । उनी सर्वत्र आलोचनाका पात्र हुन् । उनको कामबाट प्रधानमन्त्री एकदमै असन्तुष्ट छन् । त्यसकारण उनलाई सुरुमै हटाउन लागिएको छ ।
मन्त्री पदबाट हट्ने सूचीमा अर्काे मन्त्री हुन थममाया थापा । जो महिला बालबालिका मन्त्री हुन् । उनको कामबाट पनि ओली असन्तुष्ट छन् ।
त्यसैगरी पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बनेका मातृका यादव र चक्रपाणी खनाल पनि हट्दैछन् । यादव उद्योग तथा खनाल कृषि मन्त्री हुन् । यादवको त प्रधानमन्त्रीसँग बाझाबाझ नै भएको थियो ।
त्यस्तै, खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मा पनि हट्दैछन् । उनले खेलकुद क्षेत्रमा कुनै सुधार गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको ठहर छ । भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको नाम पनि हट्ने सूचीमा रहेको छ ।
त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सचिवबाटै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेकी खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई मन्त्रालय सार्ने तयारी छ । ओलीले काम नगरेको भन्दै हटाउन चाहे पनि प्रचण्डले बुहारी भनेर सहानुभूति देखाएपछि अर्काे मन्त्रालयमा सार्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार उनलाई खेलकुद मन्त्रालयमा पठाउने सम्भावना छ ।
त्यसैगरी आफ्नो अभिव्यक्तिले विवाद र चर्चामा रहने सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि मन्त्रालय हेरफेर गरिने मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो । उनलाई महासेठको मन्त्रालयमा सार्ने सम्भावना छ । बाँस्कोटामाथि फोरजी विस्तारमा घोटाला गरेको आरोप छ । पार्टीभित्रैबाट यो प्रकरणमा उनको आलोचना हुने गर्छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलसँग पनि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट छन् । यद्यपि यी दुइ मन्त्री हटाउने बारे निर्णय भएको छैन् । स्रोतका अनुसार यी मन्त्रीको पनि मन्त्रालय हेरफेर हुनसक्छ ।
उर्जा, वन, गृह, रक्षा, स्वास्थ्य, कानुन लगायत अन्य मन्त्री भने यथावत रहनेछन् ।
मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति भइसकेको थियो । यसैआधारमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई बुधबार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुँदैछ, औचापरिक कार्यक्रममा नजानुहोला भनेका थिए ।
स्रोतका अनुसार नयाँ मन्त्रीमा जनार्दन शर्मादेखि छविलाल विश्वकर्मासम्म अटाउने छन् । यद्यपि यसको निर्णय नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट हुनेछ ।